Ama-64% abantu baseMelika banemveliso ye-Apple | Ndisuka mac
Kwiminyaka yakutshanje, ngakumbi emva kokumiliselwa kwe-iPhone yokuqala, iimveliso zeApple, ngakumbi iiMacs baye baba sisixhobo esingaphezulu kwesiqhelekileyo kumakhaya amaninzi, ngakumbi eUnited States, apho ixabiso lazo libiza kancinane kunoko sinokukufumana kwamanye amazwe.
I-Apple okwangoku iyonwabele banzi kwaye yomelele isiseko somsebenzisi kwihlabathi liphela, kodwa e-United States isiseko siphezulu kakhulu, kuba ngokwengxelo ye-CNBC, icaphula idatha efunyenwe yi-All-America Economic Survey, i-64% yabantu baseMelika banemveliso enye ye-Apple.
Kwiminyaka emihlanu edlulileyo, elo nani lalingafikeleli kwi-50%., Inani eliphakamileyo ngokufanelekileyo xa sithelekisa namanye amazwe apho iApple ikhoyo. Oku kukhula kubaluleke kakhulu, ngakumbi ngenxa yobomi obude beemveliso ze-Apple, ngakumbi iiMacs kunye neePads, kuba i-iPhone isisixhobo esinexesha elide lifikelela kwiminyaka emibini ubuninzi. Ngokwale datha, amaMelika anezinga eliphakathi lezixhobo ze-Apple ze-2,6.
Izinga lobunini bamakhaya lingaphantsi kwama-50 eepesenti kumaqela ambalwa kuphela, kubandakanya abo banemali engaphantsi kwe- $ 30,000, abathathe umhlala phantsi, kunye nabasetyhini ngaphezulu kwama-50. Ngokwahlukileyo, iipesenti ezingama-87 zabantu baseMelika abanengeniso engaphezulu kwe- $ 100.000 baxela ukuba banemveliso enye ye-Apple.
Iinkcukacha ezinomdla zivela kwingxelo efanayo. Emazantsi, kukho malunga nezixhobo zeApple eziyi-2,2, ngelixa entshona inani leemveliso zobunini lonyuka laya kwi-3,7. Amakhaya atyebileyo eMelika ngokuBonakalayo baneemveliso ezingaphezulu kwe-4,7 kwikhaya ngalinye.
Uphando lubonisa ukuba iipesenti ezingama-64 zoluntu zithi ixesha kwi-smartphone yakho "linemveliso kwaye liluncedo"ngelixa iipesenti ezingama-27 zisithi "ubukhulu becala abunamveliso." Abantu abancinci eMidwest kunye nabo banemfundo yesikolo esiphakamileyo kuphela kunokwenzeka ukuba bazikhohlise kwii-smartphones zabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ama-64% abantu baseMelika banemveliso ye-Apple
Ukusuka kubantu baseMelika, HAYI baseMelika.
Ngeyicacile ukuba ibibeke amaMelika, kodwa ngokweRAE, amaMelika abizwa ngokuba ngabaseMelika hayi kuba bekweli lizwekazi. Ngapha koko, ngaphakathi kwinqaku ndibonisa ukuba ndibhekisa eUnited States.
Ipesenti iphezulu kakhulu, ndicinga ukuba le pesenti ivela kumaMelika hayi amaMelika ngokubanzi.
Ngoku iyafumaneka kwiMac Twitterrific 5 yeTwitter